Ọkà Okwu nju - China Ningbo enweghị
Ọkà Okwu Igwe Ọdụdọ Ọkà Okwu nju Manufacturer enweghị Magnetik Company Limited Ọkà Okwu nju bụ n'ozuzu aha maka na-adịgide adịgide nju-eji na ígwè okwu, ọkà okwu na ekweisi. Nju bụ isi akụkụ nke ndị a iche iche commodities. Ọ na-enye a na-adịgide adịgide ndọta maka eriri igwe na-ekwu okwu, ngwa ngwa nwetụ direction nke ugbu a na-eweta cone jijiji azụ na-apụta, mgbe ahụ, audio mgbaàmà abịa nke okwu. The nju-eji na ọkà okwu na ekweisi na-m ...
Ọkà Okwu njuManufacturer enweghị Magnetik Company Limited
Ọkà Okwu nju bụ n'ozuzu aha maka na-adịgide adịgide nju-eji na ígwè okwu, ọkà okwu na ekweisi. Nju bụ isi akụkụ nke ndị a iche iche commodities. Ọ na-enye a na-adịgide adịgide ndọta maka eriri igwe na-ekwu okwu, ngwa ngwa nwetụ direction nke ugbu a na-eweta cone jijiji azụ na-apụta, mgbe ahụ, audio mgbaàmà abịa nke okwu.
Mgbe neodymium na-adịgide adịgide nju na-ọzọ mgbe etinyere na ọkara na elu ọkwa ekweisi. Ụda àgwà bụ magburu onwe, ụda ekwedo dị mma, mara ezigbo mma olu arụmọrụ na n'ọnọdu nke ụda ubi na-ezi ezi. Na elu arụmọrụ, obere sized na ìhè neodymium nju nwere ike inochi nnukwu sized na arọ ferrite nju na ụfọdụ ngwa nwayọọ nwayọọ.
Previous: Motor Generator nju
Osote: Magnetik Myọcha Bar
Levitating Bluetooth Ọkà Okwu